Qoraalkaaga sayidku ha ku qoro waraaqo xirfadleyaal ah
Qoraalkaaga sayidka ha lagu qoro
Hayso qormooyinka sayniska saynis ahaan si xirfadaysan loo qoro. Anaga waxaad naga heleysaa caawimaad deg deg ah khibrad, aqoonyahan qoraaga ah.
Hayso qormooyinka sayidku inuu qoro khabiir - Waa maxay sababta dhabta ah?
Qormooyinka sayidku waxay u taagan yihiin waxqabadka ugu dambeeya ee imtixaanka ardayga mastarka.Waxay ku kala duwan yihiin oo keliya baaxadda shahaadada Masterka Ilaa iyo inta suurtagal ah ee ka soo baxda shahaadada bachelor-ka, maxaa yeelay aasaasiga u ah qorista fikradda guuleysanaysa ee sayidku waa soo bandhigidda isku-xirnaan iyo ujeedo ujeedo ujeedo ujeedo ah. Marka lagu daro inta badan sharraxaadda bachelor-ka, shahaadadani waxay u baahan tahay shaqo madax-bannaan oo wax looga qabanayo su'aalaha aan la xallin. Ujeedadaas awgeed, ardayga waxaa badanaa la siiyaa 60-80 bog si loo caddeeyo aqoonta habka iyo aqoonta maadada gaarka ah ilaa heerkan. Waxa u eg shaqo badani sidoo kale waa sababta ay arday badani u dareemaan inay ku adkaadeen hawshan baaxadda leh ee soo jiidashada leh. Si kastaba ha noqotee, gebi ahaanba waa suurtagal in si sharci ah loo raadsado caawimaad xirfad leh.
Qorista shahaadada mastarka iyadoo la kaashanayo xirfadle
Laakiin sidee ayey u dhaqmaan howshu Qoraayaasha cirfiidka xagga sharciga? Miyay tahay inaan ka filo cawaaqibyada sida halista xatooyada halkan? Mise waxaa jira siyaabo sharci ah oo loola xiriiro Qorista qormooyinka sayidka inaad caawimaad u oggolaato?
Marka la eego dareenka guud, runti waa mamnuuc in laga gudbo fikradaha dibedda ee aan loo calaamadin kuwaaga. Laakiin maaha in laga caawiyo helitaanka suugaanta iyo dib u eegista hababka fikirka. Tani waxay ka dhigan tahay in fikradaha kuwa kale sidoo kale laga heli karo si hagar la'aan ah loona adeegsan karo abuurista shaqadaada.
Iyada oo la kaashanayo shaqaalaheena takhasuska leh, sidaa darteed dhib maahan in la helo caawimaad deg deg ah oo sax ah oo ku saabsan soo iibsiga, qorista iyo sixitaanka qormooyinka sayidka.
"Ugu dambayntii waxaan haystaa shahaadada mastarka! Iyo astaamaha ugu sarreeya."
Maxaa la tixgelinayaa guud ahaan marka la qorayo qormooyinka mastarka?
Si rasmi ah u dhaqmo shahaadada Masterka sida shahaadada bachelor: Tan waxaa sidoo kale loo qaybiyaa xaashi dabool, jaantusyada, qaybta qoraalka, tixraacyada iyo lifaaqa. Si kastaba ha noqotee, qormooyinka sayidku waxay muujinayaan farqi weyn oo u dhexeeya qaybta awoodda, maaddaama ay jiraan baaxad ballaadhan oo loogu talagalay shaqada madaxbannaan.
Darajooyinka Bachelor-ka iyo mastarka waxay ku kala duwan yihiin baaxadda 40-50 bog ee barnaamijka bachelor-ka illaa 60-80 bog ee sayidka. Si kastaba ha noqotee, shaqo aad u ballaadhan ayaa sidoo kale suurtagal ah, maxaa yeelay qeexitaannada kursiga shaqada lagu qoray ayaa halkan go'aan ku leh.
Iyadoo la raacayo, waqtiga ka shaqeynta shahaadada mastarka waxaa lagu kordhiyay celcelis ahaan 6 bilood, taas oo sidoo kale loo aaneyn karo dalabaadka sare ee qoraalka. Si aan indhaha looga lumin hadafka marka la qorayo shaqadan oo kale, waa inaan la iska indhatirin qorshe habboon. Sida waraaqaha tacliinta oo dhan, tani waxay inta badan mataleysaa qaabdhismeedka iyo baaritaanka suugaanta ee ballaaran.
Doorashada mawduuca saxda ah ayaa muhiim u ah guusha miisaanka sayidkiisa
Tan iyo markii Naqshadaynta qoraalka sayidkiisa inta badan waxay kuxirantahay tabarucaada, mawduuca waa in si gaar ah loo doortaa. Si loo kordhiyo dhiirigelinta, mowduucyada ay ku jirto danta aasaasiga ah ee qaybtaada ayaa kaa caawinaya halkan. Sidoo kale lama ilaawin karo suugaanta hada kajirta mowduuca oo qaabab xog uruurin ah loogu isticmaali karo cilmi baaris dheeri ah. Marka dhammaan mawduucyadan si wanaagsan loola macaamilay, qoritaanka dhabta ah ee warqadda ayaa bilaaban kara.
Caawinaad raadso waqtiga saxda ah
Das Qorista shahaadada mastarka waxay noqon kartaa mid aad u baahan, gaar ahaan marka cadaadiska waqtiga uu yahay qodob. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in si sax ah loo qiimeeyo aqoonta iyo u fiirsashada la helay. Xaqiiqdii, tani waxay noqon kartaa caqabad weyn, taas oo aad uga fudud in lagu barto caawimaad farsamo karti leh.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid habraaca, xigashooyinka, tixraacyada iyo tirinta saxda ah, fadlan la xiriir khabiiradayada ka socda meelaha takhasuska u leh. Xirfadeena khibradeed waxay ku fidsantahay dhamaan maadooyinka iyo koorsooyinka. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno ururinta wareysiyada, oo ay ku jirto qiimeynta, waana ku faraxsanaan doonaa inaan kuu abuuro xirmo dhameystiran.
Ku kalsoonow ikhtiyaarka, waayo-aragnimada iyo kartidayada Ghostwriter adiguna adigaa iska leh shahaadada Masterka ka qor xirfadlaha.
Xilliga kama dambaysta ah ee soo gudbintaadu waa soo dhowdahay, weli waa inaad wax u barataa imtixaannada jaamacadeed ee soo socda oo aadan garanaynin waxa la sameeyo dhibaatooyinka wakhtiga jira awgood. Dhib malahan! Anaga waxaad naga heleysaa caawinaad xirfadlayaal ah khibrad iyo karti-yaqaan cirfiid, iyadoo aan loo eegin maadada! Qorayaashayaga ghostwriters waxay leeyihiin dulmar guud oo casri ah oo ku saabsan suugaanta qaybtooda, waxay aad u yaqaanaan eraybixinta laxiriira waxayna yaqaanaan sida loo isticmaalo hababka maadooyinka gaarka u ah si sax ah si loo hagaajiyo shahaadada Masterka erfolgreich dhammaystiran Iyada oo kooxdeena ah kooxdaada, waxaad wax u baran kartaa imtixaannada soo socda oo mar dambe uma baahnid inaad ka walwasho cilmiga sayniskaaga!
Su'aalaha ku saabsan shahaadada mastarka iyo waxa muhiimka ah haddii aad leedahay iyaga oo qoran
Sidee qaali u tahay in la qoro shahaadada Masterka?
Qorayaasheennu waxay inta badan ka shaqeeyaan qormooyinka sayidkaaga 14 maalmood gudahood. Waxay kuxirantahay qeexida iyo mowduuca, tani waa shaqsi. Tani sidoo kale waa qiimaha si gaar ah looma qeexin. Sababtoo ah waqtiga uu qoraagu qorayo qoraalkaaga bachelor-ka, wuxuu sidoo kale ka shaqeyn karaa waaxda gaarka loo leeyahay. Tixgeli xisaabta Qoraa khabiir ah badanaa la kasbado, maadaama ay kugu qaadaneyso isla waqti isku mid ah.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la qoro shahaadada mastarka?
Qorayaashayadu way awoodaan 14-31 maalmood gudahood qor qormooyinka mastarka. Ku aaddan a Inaad u qorto qormooyinka sayidkiisa ugu fiican waxaad ku qaadan doontaa qoraa takhasus gaar ah u leh qaybtaada illaa intaad tahay.
Papernerds wuxuu u xilsaaraa qorayaasha shahaadada sare iyo baxnaaninta kuu qori kara shaqo aad u wanaagsan Si laguu xaqiijiyo tayo sare leh oo ka sarreysa dhammaan shahaadada mastarka oo dhammaystiran, weydii waqti fiican.
Dabcan, qoraa khibrad leh ayaa qori kara qoraalka sayidkaaga waqti aad u gaaban, laakiin tani waxay si lama huraan ah u saameyn doontaa tayada iyo dhammaystirka shaqadaada.
Ayaa iga caawin doona qormooyinka sayidkayga?
Waxaan haynaa qoraalo aad ufiican oo haysta dhakhaatiirta iyo baxnaaninta, iyo waliba borofisarrada wax ka barata meelaha qaarkood oo kaa caawin kara qoraalka sayidkaaga.
Ma ku bixin karaa qoraalka sayidkayga qaybo ka mid ah?
Papernerds, dabcan, waxaad haysataa ikhtiyaarka inaad kubixiso qormooyinka sayidka qayb-qayb. Waan ku faraxsanahay Qeybinta bixinta iyo qeyb bixinta diyaarso